The Best Hoverboard Self Ukulinganisela Scooter 2017 - Jomo Technology Co., Ltd
Isizathu sokuba lidonsa self sekulinganisa isikuta ngokuthi "Hoverboard" wukuthi kuyilapho ugibele, kubukeka sengathi phezulu eziningana amayintshi ngenhla ngezansi. Khumbula ukugcina nabo emhlabathini. Lena indawo enhle kakhulu ezimbili-wheel self ngokulingene isikuta kagesi ukuthi ilungele ukunikeza indlela isipiliyoni uzinze ngenxa ongakhetha zayo. Iningi lalaba bantu lihlale Scooters ungase ukhokhiswe efanele kusukela ebhokisini, okuyinto engase adele brand umgibeli entsha cishe isigamu sehora ukuze sebenzisa ugibele ngaphambili kunalokho kufanele icala ngokuphelele. Ibhodi has a ijubane eliphezulu 12km ngehora futhi kungenzeka kalula unqamule emagqumeni futhi nemithambeka ukuthi amabhodi abakwazi ukuphatha. Ungalokothi ushiye ke ixhunyiwe abiza ngobusuku obubodwa bese ugcine an in ukujula iwashi phezu lokushisa ibhodi yakho ngenkathi ishaja. Isikhalazo enkulu Ngangithandaza ngokuqondene nezinkinga inqubo ukushaja
Lokhu smart zokuzisiza sekulinganisa isikuta , umuntu omdala Transporter siqu eza nge-Bluetooth (njengoba sokuba kwenziwe yakho), kulula ukujabulela umculo akhubeke kuso. It ngaphezu kwalokho ine 500W izinjini, elinamandla ngokwenza ukulungele futhi abavamile ukusebenzisa. Futhi ungase ukuqinisekisa ukuthi isikuta kwakho Ukukhetha unendawo enkulu lapho umthamo webhethri. Ngenxa yalesi elilodwa, kuzomele ukuba uzicabangele izinto ongakhetha phakathi izingxenye ezahlukene ezihlanganisa ukuphepha, okuyinto ukwamukeleka ngaphandle kokungatshazwa khona lapha, ijubane, esiye manje kakade wakhuluma, futhi isisindo esiphezulu ukuze asekele phakathi izici ezahlukene. Kuyinto satise nakuba uma ukuphatheka abuyona impikiswano lukhulu kuwe ngenxa kungcono egcwele ongakhetha. Ongakhetha It a eziyikhulu% esiyingqayizivele kokuxazulula kwakusho sikunikeze lovely ogibele ngobuchule. Zingaba omkhulu kujabulise abaneminyaka engu eziningi futhi unikeze ngendlela eyingqayizivele ukuze uthole round.
Manje ake ukuwuchitha ngumnikazi, ukuze uthole ukunambitheka lo rush engqondweni-ohlabayo. Futhi, ngeke aphule nje ngisho ne usuku ngokusebenzisa usuku. It yenzelwe wonke umuntu a njalo ngesisekelo ukusetshenziswa esikhundleni selithoyisi ukudlala alo muntu ocebile. Ukutadisha ufunde indlela ibanga hoverboard kufanele kube mnandi esengeziwe ngemva ufunde indlela imisebenzi kudivayisi futhi indlela yezingxenye nihlanganyele. Ngaso sonke isikhathi uma Cruise lento zonke skater eyeka ukuthatha uhambo. Riders kwadingeka test kangcono izingxenye isondo manje futhi. Ukulawula hoverboard nge ezincane isondo isethi Kulula futhi bathambekele ukuphendula ngokushesha Nokho namasondo ezinkulu kuthatha isikhathi ukuba adlulisele bephelele ikhuluma yakho. Thanda sisuke kokukhuluma ochwepheshe nezingozi zonke hoverboard kule irekhodi, efanayo esingase sikwenze ne hoverboard PowerBoard. Kodwa kukhona neminye imininingwane ebalulekile ukuba sibheke. Njengoba kungcono 2017, abantu ngokuqinisekile sibheke wena futhi ube umuzwa simangalele nenye umona. Kuyinto choice nephephile ngoba thina KOOWHEEL babe hoverboards ayetholakala kusukela abakhiqizi eliphakeme noma enza ibhizinisi nezinkampani Osenyangweni izingxenye hoverboard yokukhiqiza kanye ukubaluleka luqotho, intengo okungabizi.